အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: လှပတဲ့ နှင်းစက်ကလေး
26 Responses to “လှပတဲ့ နှင်းစက်ကလေး”
လှလိုက်တဲ့ အတ်ဆေးလေးဗျာ.... ကောာင်းလိုက်တာ ဖတ်လုိ့.. ပုံရှာတာလည်း တော်တယ်... အစိမ်းရောင်တွေကို တောက်နေတာပဲ..း)))
ဖတ်ရတာ ကောင်းတယ် သူများမတွေးတဲ့ အတွေးလေး
ဒါမျိုးလေးတွေ ဖတ်ရတာ နုပျိုသွားသလိုပဲ
ဖတ်ရတာ တယ်လဲကောင်းသဗျိုးးးးးးး)))
ရေးထားတာမျောပါသွားတယ်၊ ရေသံသရာလည်ပုံမှာ မိုးစက်အကြောင်းပဲဖတ်ဘူးတာ၊ ခုတော့ နှင်းစက်အကြောင်းဖတ်လိုက်ရပြီ။
စိတ်ထဲရှုပ်ထွေးနေတာ ဒီပို့စ်လေးဖတ်ပြီး ရှင်းအေးသွားတယ်..။
တကိုယ်ရည် အရည်အချင်း လှတာမလှတာထက် အများအကျိုးပြုနိုင်ဖို့က ပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ထောက်ပြထားတဲ့ စာလေးပါပဲ။
များများ ဘာသာပြန်နိုင်ပါစေ ...း)
ချောက ဘာသာပြန်တော်တော်တော်တာပဲ .. ကောင်းတယ်ဖတ်လို့း)
ဖတ်ရတာ မပြီးချင်အောင် ရေးတတ်လိုက်တာ ချောရယ်. ..
ပုံလေးနဲ့ စာလေးက ဆွဲဆောင်လွန်းလို့ လက်ထဲက ကော်ဖီခွက်ကို မသောက်ပဲ ကိုင်ရင်း အဆုံးအထိ ဖတ်မိတဲ့အထိ..။
ချောရဲ့စာတွေကို ဖတ်ရတာ ခဏတာပဲဖြစ်ဖြစ် အမြဲငြိမ်းချမ်းရလွန်းလို့ အများကြီးအများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကောင်းလိုက်တဲ့ အတွေးလေးပဲနော် အစ်မ ။ သဘာဝရဲ့ ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ လူတွေရဲ့ တွေးတတ်တဲ့ အတွေးလေးတွေကို တွေ့ရသလိုပဲ ။ စာကောင်းလေးတွေအတွက် ကျေးဇူးပါပဲ။
ဟုတ်တယ်နော် အမ။ နှင်းစက်ကလေးတွေက လှတော့လှပါရဲ့။ ဒါပေမဲ့ ရေကန်ထဲက ရေလောက် အသုံးမ၀င်လှဘူး။ လူတိုင်း နှင်းစက်ကလေးလို မကျင့်ဘဲ ရေကန်ထဲကရေလို ကျင့်ရင် လောကကြီးတော့ အမြင်တစ်မျိုး သာယာလှပလာမှာ သေချာတယ်။
တကယ့် ဖြစ်စဉ်လေးထဲ မျောသွားမိတယ် ...
အစ်မက စာရေးအတော် ကောင်းတာပဲကိုး ...
နှင်းစက်ကလေးအကြောင်းဖတ်သွားပါတယ်။ အရေးအဖွဲ့လေးတွေ သိပ်ကောင်းတာပဲ။
July 15, 2010 at 1:47 AM
အပိုအလို ဝေဖန်ထောက်ပြ စရာ မလို အောင်၊
နှင်းစက်ကလေး တစက် ကမ္ဘာမြေပြင် ကို ဖျန်းပက် အလှဆင် ထား ပုံ
လွှတ်လှ ၍ ကြည်နူးဖွယ် ကောင်း ပါ ဘိ။
ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ စွာ ဖြင့် ကမ္ဘာမြေ ကို ပိုမို အလှ ဆင် နိုင် စေ သား။
ပုံလေးတွေနဲ့လဲ လိုက်ဖက် တယ်..။
လှလိုက်တဲ့ အိုင်ဒီယာလေးပါလား ..
အရေးကောင်းလေးကို ထိမ်းထား မချောရေ...
July 16, 2010 at 2:38 AM
ဒီပို့ စ်ကို ကိုယ်ရောက်တာ ၄ ခေါက်တိတိရှိသွားပြီ-အခုမှမှတ်ချက်ရေးပေးနိုင်တော့တယ်ဗျ-
ကွန်မြူတာကြီးနေမကောင်းဖြစ်သွားလို့ မြန်မာလိုစာရိုက်လို့ မရဘူးလေ-အခုတော့ဆေးခန်းသွားးပြလိုက်တာ
နဲနဲတော့ကောင်းသလိုဘဲလေ။ ချောကစာရေးတော်တယ်။ ပုံကလေးတွေကိုချောရိုက်ထားတာမှတ်နေတာဗျ-
အောက်နားဆုံးရောက်တော့မှ အင်တာနက်ကရှာထားတာမှန်းသိသွားတယ်။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်စာနဲ့ လည်း
လိုက်ဖက်ပါတယ်။ မျက်လုံးတော့ဂရုစိုက်နော်-အင်တာနက်မှာကြီးအချိန်ကုန်မနေနဲ့ အုံးနော်-
Very nice essay. So refreshing. Two thumbs up!